Afrika yilona zwekazi lesibili emhlabeni emva endaweni Eurasia, endaweni yayo million 29 km 2, okuyinto cishe 20.4% komhlaba surface eMhlabeni. Iningi izici kuleli zwekazi, ezifana flora, nezilwane, isimo sezulu, ngenxa isikhundla salo ezindawo.
Afrika kuyinto eNingizimu Nenkabazwe kanye ewela ngu yenkabazwe. Lokhu kuholela yokuthi nezwekazi uthola isamba esikhulu elangeni nokufudumala, lokhu, esikhundleni salokho, uyachaza ukuthi kungani Afrika - nezwekazi ezishisayo.
Relief izwekazi kakhulu flat, ngoba isendaweni ipuleti lonke Afrika, okuyinto ukungqubuzana plate Eurasia zaholela ekwakhekeni kwe-Atlas ezintabeni. Esikhathini naseningizimu nasempumalanga zaleli zwekazi kukhona izinkalo eziningana, ezimbili zazo - Ahaggar futhi Tibesti - ise Sahara. Kusukela-Asia, e-Afrika qanda amakhulu kakhulu ahlukanisiwe eyayenziwe kuphela wadala Suez Canal.
Iphuzu esiphezulu ezwekazini - kuyinto owaziwa Mount Kilimanjaro, obude kuyinto 5895 metres uphinde uthele kancane iphuzu ephansi amanga kakhulu - echibini Assal, esemgwaqweni at 157 amamitha ngaphezu kolwandle.
Njalo wesikole uyazi ukuthi Africa - nezwekazi ezishisa kakhulu emhlabeni, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi ukuthi kungani lokushisa lapha kunaleyo nakwamanye amazwekazi. Isizathu salokhu Kuyaphawuleka ukuthi ngisho phakathi yenkabazwe sihamba lapha. Lokhu kuholela yokuthi Afrika kuyinto sezulu ezine ezishisayo.
Amaningi ala masimu ungaphakathi ibhande subequatorial. Lapha ungakwazi ngokucacile ukuhlukanisa Liyana nezinkathi ezomile, njengoba kuqhathaniswa bhé, okuyinto ingenye yezizathu ayinhloko Afrika - nezwekazi ezishisayo. Lokhu indawo sezulu avela eGulf of Guinea afinyelela nezwe eLake Victoria. Akunakwenzeka ukuhlukanisa izinkathi zonyaka, ngoba izinga lokushisa kule ndawo uzinzile. Climate e izingxenye ezishisayo nakwezifudumele efana lezi zindawo libhekene sezulu ecacile futhi nemvula encane.
amanzi zangaphakathi nezangaphandle
Leli zwekazi ezishisayo wageza ngu-Indian Ocean enyakatho-mpumalanga futhi Atlantic entshonalanga, kanye iMedithera noLwandle Olubomvu empumalanga enyakatho-mpumalanga ngokulandelana.
Amanzi ephakathi nezwe Afrika kukhona Nile, Congo, Niger, iZambezi nezinye nemifula. Neil - kuba mfula ongowesibili emhlabeni ngemva Amazon, ubude baso imayelana 6852 km. Uya emuva ekuqaleni Rukarara emfuleni kanye imikhawulo, ukuwela uLwandle LwaseMedithera. Nile Delta inikeza amanzi ukuze labantu elikhulu ezindaweni ezisogwini has zeminyaka eminingi.
Leli chibi elikhulu kunawo wonke e-Afrika - sikhona Victoria, okuyilona elisebenzayo futhi endaweni yesibili ngobukhulu igcwele amachibi emhlabeni.
Emnothweni wamazwe omhlaba Afrika Akaziwa ngokuthi nezwekazi ezishisa kakhulu emhlabeni, kanye yezimbangela eziyinhloko amaminerali amaningi. South Africa - kuba acebe imitfombolusito yemvelo basuke bagxila Amasimu eziningi izinto ezahlukene zokusetshenziswa.
ENingizimu Afrika kukhona nsimbi, tungsten chromite kanye nokwe-uranium-ore. Umbuso wasenyakatho ingxenye enkulu yezwekazi lase ligcwele zinc, molybdenum, ayibe nomthofu, nasentshonalanga - ku nowoyela.
Kufinyeta, kufanele kuphawulwe ukuthi endaweni yaleli zwekazi akukakabi yingcweti ngokugcwele, futhi izinhlobo eziningi yezimila nezilwane ezihlukahlukene ezihlala ezindaweni ezishisayo, ingakamiswa wafunda. Kodwa nezisetshenziswa lapha, kukhona qinile zakuzakwana ukuqhubeka ukuhlola izwekazi ezishisayo. Afrika ubulokhu uzohlala ongaqondakali futhi yiziphazamiso ezihehayo ukuze bamazwe abaningi nenithanda izilwane zasendle.
Izabelo yokuthuthuka ngomntwana iminyaka 5: ukuthuthukisa inkulumo, inkumbulo kanye logic
Esebenzisa imfundo ngokomzimba: izinhlobo kanye nezici
Algeria: incazelo, umlando, ulimi, labantu
Indlela ukupheka imifino eqandisiwe okuxubile? imifino eqandisiwe - zokupheka for izitsha okumnandi
Ukusebenza "Chic lomshado": libuyekeza ababukeli
Ukuphila okusha spoilt izinto, noma kanjani ukuze uthole amabala kapende zokugqoka
Amadolo Ubuhlungu: Izimbangela, ekwelapheni amakhambi abantu kanye yokugcoba
Mina kolwandle (isithombe)
Isivuvu lwesinaphi. buso ebusweni ekhaya